Trano sy zaridaina fandriana - IntoKildare
Burtown House, villa Zeorziana iray tany am-boalohany, akaikin'ny Athy, Co. Kildare, dia voahodidin'ny voninkazo maitso, legioma ary zaridaina feno ala sy ala an-tsaha sy tanimboly tsara tarehy.
Ny zaridaina ao Burtown dia misy faritra maromaro ao anatin'izany ny kirihitrala lehibe, zaridaina vatolampy, dia an-tongotra izay zarain'ny pergola, zaridaina sundial, zaridaina antitra, zaridaina milamina kokoa, zaridaina legioma vita amin'ny rindrina ary zaridaina lehibe ala voahodidin'ny rano. Fidirana: olon-dehibe (?? 8), ankizy mihoatra ny 5 (?? 5), tapakilan'ny fianakaviana (?? 20).
The Green Barn Restaurant eo amin'ny valan-javaboary anoloana & mitazana ny zaridaina an-dakozia misy rindrina, tsy manome afa-tsy ny vokatra azo avy amin'ny vanim-potoana farany azo avy amin'ny zaridaina tamin'io maraina io ihany.
Jo ?? s Pantry ao amin'ny The Green Barn dia fanehoana ny fitiavany sakafo, zavakanto ary haingon-trano anatiny ary fivarotana fivarotana sy toeram-pambolena, galeriana ary fivarotana anatiny mivarotra zavatra tsara hohanina, ho hita sy ho tsapa.
Outdoors, Trano sy zaridaina, Mandeha an-tongotra sy mandeha an-tongotra, Natiora sy Biby, trano fisakafoanana, mpamokatra, Athy
Ora fanokafana zaridaina: Alarobia ka hatramin'ny alahady 9 maraina ka hatramin'ny 5.30 hariva
Ora fanokafana Green Barn: Alarobia ka hatramin'ny alahady